UJosesh Mathunjwa akayizwa eyokuvakashela kukaRamaphoyisa eMarikana | isiZulu
UJosesh Mathunjwa akayizwa eyokuvakashela kukaRamaphoyisa eMarikana
UMathunjwa uzifanise nezenzeka ehostela laseMlazi izigameko zaseMarikana
'UMathunjwa wayefuna isikhundla eLonmin'
UMalema uthi akuvikelwe uMathunjwa
Johannesburg - Umengameli we-Association of Mineworkers and Construction Union (Amcu) uJoseph Mathunjwa uthi isimemezelo sakamuva sikaMengameli Cyril Ramaphosa ngodaba lwaseMarikana kuhloswe ngaso ukudelela inyunyana.
Ngesikhathi ethula inkulumo enkonzweni yomngcwabo kaWinnie Madikizela-Mandela e-Orlando Stadium eSoweto ngoMgqibelo, uMengameli Ramaphosa umemezele ukuthi yena nomholi we-Economic Freedom Fighters uJulius Malema bazovakashela eMarikana.
OLUNYE UDABA: Zimkhalele osolwa ngokudlwengula isalukazi
UMalema uhlale esola uRamaphosa ngokuba neqhaza ekutheni amaphoyisa abulale abavukuzi abangu-34 eMarikana eNorth West ngo-2012.
UMathunjwa uthi izisulu zaseMarikana akumele zisetshenziselwe ukuxazulula ukungaboni ngasolinye ezindabeni zezombusazwe.
UMathunjwa ukholelwa ukuthi lo ‘mshado’ ophakathi kukaMengameli we-ANC kanye ne-EFF kuhloswe ngawo ukwakha ubudlelwane phakathi kwalezi zinhlangano zezombusazwe.